Havana kuwana chii iwe vaitsvaka mamwe mapeji panzvimbo? Mhinduro zvichida pano asi, kana hazvisi, unogona nguva dzose titumirei kukurumidza mubvunzo. We wagadzirira kubatsira chero nzira zvatinogona nguva dzose.
Mubvunzo upi akasiya seisingapindurwi? zvakanaka pano tine mamwe inonyanya mubvunzo asi kana asingadi zvakakwana unogona titumirei mubvunzo wako uye tichaedza kupindura zvakanaka nguva zvinobvira.
Ndinoziva zvishomanana pamusoro China. Anogona Mandarin Morning kundibatsira?
Mandarin Morning anopa vatorwa bhiriji kupinda risingazivikanwi uye enchanting nyika China.
Nokuti avo vanouya kuna China kekutanga, kana kuti bhizimisi kana mafaro, upenyu hunogona zvawandisa tisingazivi veko kana kunzwisisa mutauro. Simple zvinhu daily zvakadai achirayira zvokudya, Achitora tekisi, uye vachibvunza mirayiridzo inogona kuva kushatirisa uye dzimwe nguva hazviiti.
Mandarin mutauro kunyudza chirongwa MandarinMorning kuti Intensive anopa vadzidzi mashoko akashandiswa uye chivimbo kuti kubudikidza uye vanakidzwe noupenyu China.
Chii chinosiyanisa Mandarin kunze ndechokuti chikoro kwete chete inopa vadzidzi pamusoro-notch Mandarin mutauro maturusi asi inopa Chinese "shamwari" uye shamwari kubatsira chero mhando ezvinhu.
Chii muguta Shanghai wakafanana?
Shanghai ndiro guta kupfuura simba mune China uye chimwe chezvinhu electrifying maguta munyika! Pane zvinotendwa zvizhinji neanofadza zvokuita uye pedyo Shanghai - guta rine zviuru maresitorendi, nembariro, netsvimbo, kunotenga, nzvimbo zvenhau, uye zvakawanda. Zvinonzi rakamiswa pedo dzakawanda tsika vapfumi maguta China akadai Suzhou uye Hangzhou. Regai Mandarin Morning kuzozivisa iwe kuguta remangwana. Click kudzidza zvakawanda pamusoro chii chinoita Shanghai zvikuru.
Chii yangu Chinese chechetere?
Unogona kuedza kwako Chinese pamwero nokutora paIndaneti bvunzo kana kuronga kushanyira rimwe kembasi uye kunosangana nyanzvi. Click kutora paIndaneti Chinese chechetere bvunzo. The Pamusana paIndaneti bvunzo achakupa imwe chikamu chaiwo wako Mandarin chechetere.
Ndingaita sei chiratidzo nokuda MandarinMorning mapoka?
Unogona kungoti kupedza paIndaneti kushanda kana kudana 021-52287809 uye nyanzvi kuchakubatsira.
Zvicharamba kutora kuti ndidzidze Chinese?
mudzidzi wose anodzidza ari ega pandaida; Zvisinei avhareji MandarinMorning mudzidzi uchadzidza zvinhu hwokukurukura (kuverenga, kunyora, kuteerera, uye kukurukura) mumaawa 120 zvidzidzo. Izvi zvinosanganisira mashoko ose 1000 mashoko uye zvirevo. Students anogona kupedza zvenguva pamwero pashure pemaawa 180. Izvi zvinosanganisira mashoko ose 1500 mashoko uye zvirevo. Mushure zvenguva yakati sandara, vadzidzi vanogona kutamira siyana nzvimbo yepamusoro Chinese (Business, Tourism, Literature, etc.) - panguva yepamusoro vanochiva vadzidzi mberi dzavo pandaida.
Ko Mandarin Morning kupa pokugara?
Ehe. Kune vazhinji dzimba zvisarudzo Shanghai - kubva zvetsika Chinese chatiri mupenyu kusvikira Ultra-ano vokuMadokero dzokugara. Prices yemanyorero Avhareji kumativi rmb 6500. Please kutumira email kuna MandarinMorning pa info@mandarinmorning.com pamwe zvaunofarira uye mumwe nokukurumidza kuwana kuchaita shure kwamuri zvokusarudza, kusanganisira Pricing.
Aripiko MandarinMorning iri?
MandarinMorning kuri mumwoyo Shanghai, guta China vanofanira simba. Pazvikoro zviri nyore chiri pedyo zvokufambisa, kunotenga, uye mumaresitorendi. Kuti uwane mashoko pamusoro kusvika MandarinMorning ritenderane, tinya pano.
vadzidzi por MandarinMorning kirasi Vangani?
Kirasi hukuru hazvizovipozve yakakura kupfuura vadzidzi 8 (avhareji 4 kana 5). MandarinMorning riri kubudirira chete kana kudzidza uye vanonakidzwa ruzivo rwavo. With kirasi duku hukuru, chinangwa kuti maximize pachako kutarisirwa uye kuderedza mukirasi nenyonganiso.
Kana Ndinogona kutora kirasi?
Vadzidzi vane mukana kubatana boka kirasi kembasi panguva kugara yakarongwa kosi kana anogona kuronga private zvidzidzo chero nguva. Email kubvunzurudza kuti info@mandarinmorning.com kana kudana 021-52287809.
Anogona mudzidzisi kundidzidzisa kumba / muhofisi?
Courses anogona kudzidziswa pagungano MandarinMorning kembasi kana mudzidzi vaifarira munzvimbo (musha, hofisi, kana zvimwe).